I-UIP16000 - Iprosesa enamandla kakhulu ye-Ultrasonic - Hielscher Ultrasound Technology
Ama-watts ayi-16,000 wamandla e-ultrasonic enza i-UIP16000 ibe iprosesa elinamandla kunazo zonke emhlabeni. Kuklanyelwe ukusebenza ngamaqoqo amayunithi amathathu noma ngaphezulu, ukucubungula ivolumu enkulu, njengokufaka i-homogenize, isabalalisa noma i-deagglomerate.
Njengoba izinhlelo zokusebenza ze-ultrasonic zingalinganiswa ngokuqondile-umugqa, umthamo wokucubungula uyakhuphuka ngamandla we-ultrasonic. Ezingeni lokukhiqiza, izinqubo zivame ukudinga amandla amaningi kune-40kW. Ngezicelo ezinje zokucubungula, sincoma ukusebenzisa iqoqo le I-UIP10000 noma i-UIP16000.
I-UIP16000 ihlanganisa amandla aphezulu kakhulu ngesilinganisi esincane sonyawo. Ngokusetha okujwayelekile, i-UIP16000 idinga amakhabethe ama-2 we-600mm x 600mm onyawo kuphela. Lokhu kwenza kube lula ukuphinda usebenzise iprosesa ye-ultrasonic ezinhlelweni ezikhona. I-UIP16000 ngayinye isebenza njengeyunithi yezincwadi eziqukethe uqobo, kufaka phakathi i-generator, i-transducer, i-sonotrode, i-flow cell nesiqalo esivaliwe se-loop. Amakhabethe wensimbi angenasici eza nezindonga ezifakwe ngumsindo ukwehlisa ukuphuma komsindo ngaphandle kwekhabethe.
Inkinga Yezinqubo Phezulu
Isicelo ngasinye se-ultrasonic sidinga inhlanganisela ethile enhle ye-sonication amplitude, ukucindezela kwamanzi nokushisa. Lokhu kulungiselelwa okuphelele kungatholakala ebhokisini elincane noma ukuhlolwa kwezinga lesithenjwa, isib. Ngokusebenzisa a I-UIP1000hd (1kW) nge-flow cell. I-UIP1000hd ivumela ukuhlukahluka kwamapharamitha we-sonication kuhla olubanzi. Lapho sekuvele ukubonwa kokulungiswa kwephalamende, ukusebenza kwenqubo kungalinganiswa ngokuqondile. Ngakho-ke, uhlelo lwe-Turnkey luza kuqala ukusebenza ukuze lusebenze ekumeni kahle kwepharamitha. Ithebula elingezansi libonisa amandla okusebenza ajwayelekile wohlelo lwe-4x16kW.
4x16kW Ukusebenzisa Amandla
12 kuya 50m³ / hr
emulsification, isib amafutha / amanzi
6 kuya 32m³ / hr
ukufakwa kweseli, isib algae
1 kuya 12m³ / hr
Ukuhlakazeka / i-deagglomeration
0.3 kuya 6m³ / hr
ukugaya okumanzi nokugaya
0.2 kuya 4m³ / hr
I-Simple System Qala-Up
I-UIP16000 yakhelwe ukwenza lula ukufakwa nokuqala-up. Amakhabhinethi eze eze pre-amisiwe. Kudingeka ixhumeke ekunikezeni imithombo yezindaba, ukunikezwa kwamandla, namanzi okupholisa, kuphela. Ukuxhumana kwedatha kuyatholakala ngokuzithandela.
Njengoba kuphawuliwe ngenhla sincoma ukuziphatha kwezinqubo zokuqalwa kwenqubo kanye nenqubo yokwenza ngcono ngezinga elincane. Sizokujabulela ukusiza ekukhetheni imishini efanele yokuhlola okuqala kanye nokusetha okuphelele kwezinga eliphansi. Ngaphandle kwalokho, ungaqhuba ukuhlolwa kwezinqubo zethu inqubo yokwelapha.
Sicela usebenzise ifomu elingezansi, ukucela ulwazi oluthe xaxa mayelana ne-UIP16000.
UIP16000 – Ipropress Industrial
16kW amandla e-ultrasonic ekusetshenzisweni kweziphuzo, isib. Ukuxuba noma ukuhlakazeka